Yaa aanu nahay iyo sababta noo dooratay - Hebei Fine Art Co., Ltd.
Kaan nahay iyo maxaa noo doora
Hal qayb oo ka mid ah Hebei Fine Art Co., Ltd.
Vannova waa shirkad ganacsi caalami ah oo loogu talagalay macaamiisha iyo alaabta warshadaha. Shirkadeena waxaa la aasaasay 2007. waxaa naga go'an inaan siino alaab tayo leh iyo adeegyo ku qanacsan macaamiishayada adduunka oo dhan falsafada shirkadda ee daacadnimada, hal-abuurka, wadajirka iyo dadaalka
Waxaan leenahay khad wax soo saar oo dhamaystiran iyo qalab si aan u daboolno awoodda wax soo saarka iyo kooxdayada baaritaanka xirfadeed, xakamaynta tayada adag. Waxaan bixinaa adeegyada OEM iyo ODM kooxdayada naqshadeynta ayaa kaa caawin kara habaynta calaamadahaaga gaarka ah. Kooxdayada iibka ayaa ka jawaabi doonta oo xallin doona dhibaatooyinkaaga marka aad gashanayso cilia macmal ah 24 saacadood gudahood.
Waxaan heshiis la galnay DHL, FEDEX, UPS, EMS, SF iyo TNT si aan u siino ilaalinta xamuulka iyo gaadiidka ka sii fiican, si loo hubiyo inaad heli karto indho-shareer la dalbaday.
Waxaan diyaar u nahay inaan horumarino oo aan si wadajir ah u horumarino macaamiisheena. Waxaan sidoo kale diyaar u nahay inaan sii wadno xiriirka iskaashiga muddada fog iyo xasilloon ee macaamiisha. Iyada oo loo marayo hagaajinta joogtada ah ee tayada badeecada iyo adeeggeena, ku guulaysta kalsoonida macaamiisha, macaamiisha aad u huba in ay nala shaqeeyaan, si loo gaaro xaalad guul-guul ah.
Had iyo jeer waxaan u heellannahay inaan siino macaamiisha alaabada ugu wanaagsan ee suuqa ku jihaysan, Sida xirfadle ganacsade indho-shareer ah iyo soo-saare hoos yimaada magaca VANNOVA, waxaan ku siin karnaa noocyo kala duwan oo badeecooyin indho-shareer ah oo ay ka mid yihiin karbaashyada Strip, fidinta indhaha, indhashareeraha cluster flare, fidinta sunniyaha Tayada la isku halayn karo waa go'aankeena joogtada ah ee dhammaan macaamiisha adduunka oo dhan. Dadaal joogto ah oo diiradda saaraya tayada badeecada iyo adeegga, iyo sidoo kale cilmi-baaris xirfadeed iyo taageerada kooxda horumarinta, waxaan aaminsanahay in VANNOVA ay noqon doonto doorashadaada ugu fiican ee Shiinaha.
Waxaan aqbalnaa dalabka OEM ee jumlada ama macaamiisha qaybiyaha kuwaas oo leh qaabab naqshadeed cusub oo moodada ah ee jeedal indhaha kuwaas oo la qabsan kara suuqyada kala duwan ee adduunka oo dhan.
Ma aanan liis gareyn dhammaan alaabtayada halkan, si aad u hesho naqshad dheeraad ah oo leh qiimo iyo faahfaahin faahfaahsan, ama wax su'aalo ah oo ku saabsan alaabtayada, fadlan nagala soo xiriir email ahaan ama telefoon, Waxaan had iyo jeer si daacad ah u rajeyneynaa alaabtayada heerka koowaad iyo adeeg aad u fiican
si loo helo qanacsanaanta macaamiisha iyo aqoonsiga.